Забур 105 CARS - Nnwom 105 AKCB
1Da Awurade ase na da ne kɛseyɛ adi.
Ma wiase nyinaa nhu nea wayɛ.
2Monto dwom mma no, monto ayeyi dwom mma no;
monka nʼanwonwade no nyinaa.
3Monhoahoa mo ho wɔ ne din kronkron mu;
momma wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no nnya koma mu anigye.
4Momma mo ani nna Awurade ne nʼahoɔden no so;
na monhwehwɛ nʼanim bere biara.
5Monkae anwonwade a wayɛ
ne nsɛnkyerɛnne, ne atɛn a obui,
6Abraham mma, Onyankopɔn asomfo,
Yakob mma a wapaw wɔn.
7Ɔyɛ Awurade, yɛn Nyankopɔn.
Nʼahenni da adi wɔ asase so nyinaa.
8Ɔkae nʼapam daa nyinaa,
asɛm a ɔhyɛ maa awo ntoantoaso apem no,
9apam a ɔne Abraham yɛe no,
ntam a ɔka kyerɛɛ Isak no.
10Ɔhyɛɛ mu den maa Yakob sɛ mmara,
de maa Israel sɛ apam a ɛbɛtena hɔ afebɔɔ.
11Ɔkae se, “Mede Kanaan asase no bɛma wo
sɛ kyɛfa a ɛbɛyɛ wʼagyapade.”
12Ɔkaa eyi bere a na wɔnnɔɔso,
ahɔhokuw ketewa bi a wɔwɔ Kanaan.
13Wofii aman so kɔɔ aman so;
fii ahemman mu kɔɔ ahemman mu.
14Wamma obi anhyɛ wɔn so;
wɔn nti, ɔkaa ahene anim se:
15“Mommfa mo nsa nka wɔn a masra wɔn ngo;
na monnyɛ mʼadiyifo bɔne bi.”
16Ɔmaa ɔkɔm baa asase no so
na ɔsɛee akwan a wɔfa so nya wɔn aduan nyinaa;
17na ɔsomaa ɔbarima bi dii wɔn anim,
Yosef a wɔtɔn no sɛ akoa no.
18Wɔde mpokyerɛ guu ne nʼanan,
na wɔde dade nkɔnsɔnkɔnsɔn hyɛɛ ne kɔn,
19kosii sɛ nea ɔhyɛɛ ho nkɔm no baa mu,
kosii sɛ Awurade asɛm no daa no adi sɛ ɔyɛ ɔnokwafo.
20Ɔhene no soma ma wokoyii no;
aman no sodifo gyaa no.
21Ɔyɛɛ no ne fi so wura
nea ɔwɔ nyinaa sodifo,
22sɛ ɔnkyerɛ ne mmapɔmma nea ɔpɛ
na ɔnkyerɛ ne mpanyimfo nyansa.
23Na Israel kɔɔ Misraim;
Yakob kɔtenaa Ham asase so sɛ ɔnanani.
24Awurade maa ne nkurɔfo ase dɔe;
ɔyɛɛ wɔn bebree dodo maa wɔn atamfo,
25wɔn a ɔdan wɔn koma sɛ wɔntan ne nkurɔfo
na wɔmpam nʼasomfo ti so.
26Ɔsomaa ne somfo Mose,
ne Aaron a na wayi no no.
27Wɔyɛɛ ne nsɛnkyerɛnne nwonwaso wɔ wɔn mu,
nʼanwonwade wɔ Ham asase so.
28Ɔsomaa sum, na ɔmaa asase duruu sum,
efisɛ na wɔatew nʼasɛm no so atua.
29Ɔmaa wɔn nsu nyinaa dan mogya,
nam so kum mu mpataa.
30Mpɔtorɔ bɛhyɛɛ asase no so ma,
na wɔhyɛn ɔman no sodifo mpia mu.
31Ɔkasae, na nwansena bebree
ne ntontom baa ɔman no mu baabiara.
32Ɔmaa wɔn osu dan mparuwbo
a anyinam nenam mu wɔ ɔman no nyinaa mu;
33Ɔsɛee wɔn bobe ne borɔdɔma nnua
na obubuu ɔman no so nnua pasaa.
34Ɔkasae, na mmoadabi bae,
tɛwtɛw a wontumi nkan wɔn;
35wɔwee ahabammono biara a ɛwɔ wɔn asase no so,
na wodii wɔn mfuw so nnuan.
36Afei okunkum wɔn asase so mmakan nyinaa,
wɔn mmarimayɛ mu aba a edi kan nyinaa.
37Oyii Israel a ɔso dwetɛ ne sikakɔkɔɔ
fii wɔn mmusuakuw mu a obiara ho antɔ kyima.
38Misraim ani gyei, bere a wɔkɔe,
efisɛ na Israelfo ho hu atɔ wɔn so.
39Ɔtrɛw omununkum mu kataa wɔn so,
na ogya maa wɔn hann anadwo.
40Wobisae, na ɔbrɛɛ wɔn mparuwbo
ɔmaa ɔsoro aduan mee wɔn.
41Obuee ɔbotan mu maa nsu fii mu bae;
na ɛsen faa sare no so sɛ asubɔnten.
42Ɔkaee ne bɔ kronkron bi a
ɔhyɛɛ ne somfo Abraham no.
43Oyii ne nkurɔfo maa wɔn ani gyei;
wɔn a wapaw wɔn no dii ahurusi;
44ɔde amanaman no nsase maa wɔn,
na nea ebinom abrɛ anya no bɛyɛɛ wɔn agyapade
45na wɔahwɛ nʼahyɛde
adi ne mmara so.
Munyi Awurade ayɛ.
AKCB : Nnwom 105